ကောင်းကင်ဖြူ: My Treasure
မင်္ဂလာပါဗျာ ။ တဂ်ပိုစ့် မရေးရတာတော်တော်ကို ကြာပါပြီ ။ အခုတော့ အပျိုကြီး သမီစံ က My Treasure ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတဲ့တဂ်ထားတွေ့ လို့ဝမ်းသာစွာ ရေးရပါပြီ ။ အယ် …. My Treasure
ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးကို အစပြုခဲ့တာတော့ blogger မောင်နွေလလို့သိခဲ့ရပါတယ် ။ အပျိုကြီပြောသလို blog တိုင်းထားရှိသင့်တဲ့ တဂ်ပိုစ့်လေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ အမှတ်တရ တစ်ခုပေါ့ဗျာ ... ။
ကျနော် blog ကို ၉/၂၀၁၀ လောက်က စခဲ့တာပါ ။ အချိန်လည်းမရ ၊ နည်းပညာ အားနည်း နဲ့သူများတွေ နာရီဝက်အတွင်း blog တစ်ခု ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပင်မဲ့ကျနော် လုပ်တာ ၃လ ကြာသွားပါတယ် ။ အဲ့လို့ တော်တာပါ ။ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့လက်ဦးဆရာကတော့ blogger ကိုနေမျိုး (ထားဝယ်နေမျိုး) ဖြစ်ပါတယ် ။ မှတ်မှတ်ရရ ၂၂ . ၁၂ . ၂၀၁၀ မှာတော့ blog setting ထဲက Blog Readers မှာ Anybody ကိုရွေးပြီ ဒီ blog လေးကို စတင်ခဲ့တာပါ ။ အဲ့ဒီနေ့ဟာ ကောင်းကင်ဖြူနဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ ၂ လပြည့် အမှတ်တရပေါ့ … ။
အယ် … ဒီမေးခွန်းကိုဖတ်မိတော့ အခုမှ စဉ်းစားမိတယ် လုပ်ပြီဆိုမှတော့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမှာပေါ့နော် … ။ တောက်တိုမယ်ရ ရေးမိရေးရာတွေ ရေးရင်း နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာကြီး ၊ အောင်မြင်တဲ့ blogger ကြီးဖြစ်မို့…. လုံးဝ … လုံဝ … မရည်ရွယ်ပါဘူး ။ မတော်တဆလည်း ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး ကိုယ့်အခြေနေကို သိပါတယ် … :D … ။
အမှန်တိုင်းမရှက်ပဲ ဝန်ခံရရင် ကောင်းကင်ဖြူကို ကြွားချင်လို့ပါ ။ “ ငါ့လည်း စာတွေ ကဗျာတွေ ရေးတက်တယ်ပေါ့ ” …… ။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ …. ကျနော်တို့ ချစ်သူ ဖြစ်ကာစက အလုပ်တစ်ဖက်စီနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ တွေ့ ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ချစ်သူကောင်းကင်ဖြူက …. “ ဘယ် blog မှာရေးထားတာတော့ အရမ်းကောင်းတယ် …. ဟိုကဗျာလေး တော့ အ၇မ်းကြိုက်တယ် …. ” နဲ့ခဏခဏ ပြောပါတယ် ။ ကြာလာတော့ ကျနော် မောင်ဘုန်းလည်း …. “ ငါ့လည်း စာတွေ ကဗျာတွေ ရေးတက်တယ်” ဆိုပြီ ပြချင်လို့ဒီ blog လေး ကို လုပ်ဖြစ်တာပါ ။ လုပ်ပြီသွားတော့မှ ချစ်သူက မှတ်ချက်ပေးပါတယ် ။ “ ကို …. က စာလည်းမရေးတက် ကဗျာလည်း မဖြစ်ဘူးနော် ……” တဲ့ ……. ။ အဲ့သလိုပါ …. ဗျာ ….. ။
(၃) သင့်ရဲ့ဘလော့လေးအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ထိ ရည်မှန်းထားသလဲ … ဘယ်လောက်ထိ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသလဲ ?
ရည်မှန်ချက်တော့ မယ်မယ်ရရ မရှိပါဘူး …. ။ မြတ်နိုးတန်းဖိုးထား တယ်ဆိုတာထက် သံယောဇဉ် တော့တော်တော် ဖြစ်မိပါတယ် ။ အခုဆိုရင် ကွန်ပြူတာဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျနော် blog ထဲကို ဝင်တာ အကျင့်လို့ပြောရမလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ … ။ ကွန်ပြူတာရှေ့ မရောက်ဖြစ်ရင်တောင် ရောက်ရာ အရပ်ကနေ ဖုန်းနဲ့ဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် …. ။
မဖြစ်ဖူးပါဘူး …. ။ ဒါပင်မဲ့ blog ရေးတဲ့ mail ကိုတော့ နှစ်ပတ်တစ်ခါ (သို့ ) တစ်လ တစ်ကြိမ်တော့ ခဏခဏ hack ခံရပါတယ် ။ hack တဲ့သူက အရင်ကတော့ thailand IP နဲ့ ပါ အခုတော့ china IP ဖြစ်သွားပါတယ် ။ တစ်ခြားလူမဟုတ်ပါဘူး ။ ကောင်းကင်ဖြူပါပဲ …. :D ။
ကျနော်လိုပဲ ခဏခဏ hack ခံရတဲ့ blogger တစ်ယောက်ရှိပါသေးပါတယ် ။ တစ်ခြားလူ မဟုတ်ပါဘူး အားလုံးသိတဲ့ ကျနော် တို့ ရဲ့ဆရာ ကိုရင် ပါ … ။ ဟိုတလောက အချိန်မဟုတ် ဆရာရင် မီးလင်းနေတာတွေ့ တာနဲ့“ မအိပ့်သေးဘူးလား ဆရာလို့” ….. နှုတ်ဆက်လိုက်တာ ဆရာမဟုတ်ဘူးဆရာကတော် ….. တဲ့ဗျာ ……:D ။
(၅) ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တုန်းက သင် ဘယ်လောက်ထိ ခံစားခဲ့ရဖူးလဲ … ? မပျောက်ဆုံးသေးသူဆိုရင်လည်း အကယ်၍ သင့်ဘလော့လေး ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ … ?
အယ် …. မပျောက်ဖူးသေးတော့ မပြောတက်ဘူးဗျ … ။ အဲ့လိုပျောက်မှာ ကြောက်လို့backup လည်းလုပ်ထား ပါတယ် ။ နောက်ပြီး blog Admin မှာလည်း mail နှစ်ခု ထည့်ထားပါတယ် ။ ဆိုင်မလားတော့ မသိဘူး အတွေးကတော့ တစ်ခုပါသွားရင် တစ်ခုကျန်တယ်ပေါ့ ဗျာ … ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 6:21 AM
mstint August 15, 2012 at 7:01 AM
တဂ်ပို့စ်လေးဖတ်ရတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လိုရင်းတိုရှင်းလေးပါလား မောင်ဘုန်းရေ။ မောင်ဘုန်းရေးတဲ့ ကဗျာလေးတွေ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် ။ ဘလော့သက်တမ်းက တီတင့်ထက် တစ်နှစ်စီနီယာမို့ အားကိုးပါတယ်နော်။
အလွမ်းမြို့ August 15, 2012 at 10:25 AM
backup လည်းလုပ်ထား ပါတယ် ။ နောက်ပြီး blog Admin မှာလည်း mail နှစ်ခု ထည့်ထားပါတယ် ....ဒါလေးလည်း မှတ်သားသွားဦးမယ်...ဆိုင် ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင်ပေါ့
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် August 15, 2012 at 8:48 PM
တဂ်လေးအားပေးသွားတယ် မောင်ဘုန်းရေ ။ ကောင်းကင်ဖြူကဘာကြောင့်ခဏခဏhackတာလဲဟင် ။
AH August 16, 2012 at 1:49 AM
အဟား.. အဟက်ခံရပုံချင်း တူနေပြီ နောင်တော်...
Candy Khine August 17, 2012 at 10:59 AM
ပျောက်လိုက်တာ.. တက်(Tag ဟုအသံထွက်ပါ) လုပ်ခံရမှပဲ ပြန်ပေါ်တယ် :P.. ကန်ဒီပဲ ပိုစ့်အသစ်တွေမမြင်လို့လား မပြောတတ် :P
မြတ်နိူးသူ(MUFL) August 18, 2012 at 2:23 AM
Nwai La August 28, 2012 at 11:14 PM
ဟုတ်တယ် ... အစ်ကိုပြောသလို
backup လည်း လုပ်ထားသင့်သလို
Admin မှာလည်း acc နှစ်ခုလောက် ဖြည့်ထားသင့်တယ်